Qorannaan kaffaltii tajaajilaa fi dhiyeessii loojastiiksii Ityoophiyaan buufataalee Eertiraa yammuu fayyadamtu murteessu xumurame – Fana Broadcasting Corporate
Qorannaan kaffaltii tajaajilaa fi dhiyeessii loojastiiksii Ityoophiyaan buufataalee Eertiraa yammuu fayyadamtu murteessu xumurame
Finfinnee, Fulbaana 29,2011(FBC)- Qorannaan Ityoophiyaan buufataalee Eertiraa yammuu fayyadamtu kaffaltiin tajaajilaa fi dhiyeessiin loojastiiksii maal ta’uu akka qabu muul’isu karaa Ityoophiyaatin xumurame.
Biyyoonni lamaan hariiroo isaanii ega haaromsaniin booda buufataalee waliin fayyadamuuf waliigaluun isaanii ni yaadatama.
Ityoophiyaan waggaa 20 dura; waraana biyyoota lamaanitti aansee buufataalee Eertiraa fayyadamuu dhaabdet turte.
Waliigaltee hoggansa biyyoota lamaanitiin fayyadamtummaa diinagdee cimsuuf hojjetamaa jira.
Suphaa daandirraa kaasee amma buufata Mitsiwwaa sadarkaa amma irra jiruun hojii eegalchiisun danda’amurra ga’ameera.
Daayreektarri koominikeeshinii Abbaa Taayitaa Dhimmoota Maariitaayimii aadde Yashii Fiqaadaa qophii barbaachisaan bifa lamaan adda qoodamee hojjetamaa jiraachuu himu.
Kunis hojii bu’uuraalee misoomaa dabalata jedhan.
Ityoophiyaan buufataalee Eertiraa yammuu fayyadamtu dhimmoota deebii argachuu qaban adda baasudhaan irratti hojjetamaa jira jedhan.
Kaffaltiin ammam ta’uu akka qabu, dhiyeessin guumruukaa fi loojastiiksii maal ta’uu akka qabu deebin itti laatameera jedhan aadde Yashiin.
Dhimmi taarifaa karaa Eertiraatinis qoratamaa kan jiru yammuu ta’u, qorannaan biyyoota lamaanii ilaalamee murteerra kan ga’amu ta’a.
Tajaajila buufataaleetin ala hojiin meeshaalee doonotarraa buusuu, kreenonni koonteeynaroota sochoosanis kana keessatti hammatamaniiru.
Dhaabbata Tajaajila Geejibaa fi Loojastiiksii Galaatti itti aanaan hoji gaggeessaa tajaajila shiippiingii Kaappiteen Tafarraa Badhaasaa buufataaleen kan Eertiraa ta’uu isaanitiin dhiyeessin loojastiiksii dabalataa Eertiraadhan hojjetama jedhan.
Ityoophiyaa fi Ameerikaan waliigaltee seera kabachiisuu fi bulchiinsa haqaa walii…
Dr. Abiy, Sheek Mahaammad Biin Abdulraahimaan Biin Jaasiim Al Taanii waliin…
Samaraatti warshaan ashaboo Birrii miiliyoona dhibba 4 fi miiliyoona 32 olii ebbifame
Preezdaant Saahilawarq Zawdeen, Sheek Mahaammad Biin Abdulraahimaan Biin Jaasiim Al…